MUUQAAL: Xildhibaan Jeesow oo dhegaha ka tumay Faroole iyo Jawaabta uu siiyey (Daawo) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Xildhibaan Jeesow oo dhegaha ka tumay Faroole iyo Jawaabta uu siiyey (Daawo)
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Jawaab adag u diray Madaxwaynihii Hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole Hadana ah Sanatar ka tirsan Aqalka sare oo dhaliilo u jeediyey Maamulada taageersan DF Soomaaliya, ee aan ahayn Puntland iyo Jubbaland.
Daahir Jeesow ayaa sheegay inaan C.raxmaan Farloole laga xishoon doonin, Wuxuuna ugu Hanjabay in Lasoo qaban doono, hadii aanu dhibaatada ka dayn Soomaaliya. “Lagaa Xishoon maayo, waa lagu soo Qaban doonaa, Ciidamada waxay marayaan Burtinle, Dhinaca kalana Dhoobley ayay Marayaan” Ayuu yidhi Jeesow.
“Hadalkaaga waxaa loo arkaa inaad tahay Qof Waayeel Noqday ama inaan Dawlad Nacayb ku dhiman doontid, Soomaaliya Soomaali baa leh, Ajaanib kama taliso, Maanta Daba-dhilifyadda nimanka shisheeya daba socda looma Joojin doono. Doonta Waa raran tahay dhinacaaga kasoo raac”. Ayuu yidhi Jeesow.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42022
19 Comments for “MUUQAAL: Xildhibaan Jeesow oo dhegaha ka tumay Faroole iyo Jawaabta uu siiyey (Daawo)”
April 6, 2021 - 7:31 pm
Daanyeer Jeesow oo khaniis ah, miyaa afkiisa uraaya dr. Faroole balaq u kusii ahaa.
Daabyeer Gaaljecel ah oo agoontii Kacaanka ah!!!!!
Walaahi Farmaajo waa daanyeer, aad iyo aad u aqli xun kuwa noolan ah adeegsanayo..kkkk
Kuye ciidamadii kusoo qaban lahaa Faroole Buurtinle waa soo dhaafeen..kkkkkkl
Horta Khaniis Jeesow makala yaqaan Galkacyo iyo Buurtinle kee Xamar xiga xitaa ma ogyahay in Buurtinle Nugaal tahay oo Mudug u jirto 350 km dhinaca Garoowe Laamiga..kkkkkkkk
Somalia waa in cawaantaan Farmaajo wax u sheego laga badbaadiyo, walle haddii kale meel dheer ayaa laga doonin Somalia.
Siyaad Bare god ku riday markii lasoo dhoodhoobay oo dal noqon rabno moodnay oo in democracy iyo federal la helay, Farmaajo ayaa yimid macangag ah oo xitaa Jeesow ka aqli xun..
Ilkayar dalka hala qabto iyo daanyeerta Farmaajo wato oo Jeesow ka mid yahay.
Haddaad diidan cidda oysa ama laga xaniinjo bato arkin..
Somalia marxalad adag gashay…allow dadkaaga aqli sii.
Xitaa lama oga, dolar gaalada bixiso in xiran mar dheerayn..aan aragno in Jeesow weli Xaarmaajo daba socdo…
Somali yaan fahmin daanyeertaan N&N oo raba in Somalia dagaal ku celiyaan oo aamisan in Somalia Faroole Garoowe xoog looga soo qaban…. Kkkkkkkkk
Dhagla ayaa Salag leh.
Daanyeer Farmaajo hadduu Somali 2 bilood kale sii xukumo, Somalia is dead.
Badbaado qaran ayaa loo baahan yahay..ninka fahmin waa howl u taal..
Aan aragno ninka istifaacan karin tuuladiisa….😎
Vivo federal, free and democratic Somalia.
Waa aduunka Galjecel u dhaaranaya boqortooyadii Majeerteen oo weliba ugu dhaaran in Garoowe laga soo qaban…kkkkkkkkk
Waali ayaa socota..I am watching.👏🏿🐪👊
Deni waa in ka dhex baxo Xamar iyo Daanyeerta Xamar joogta uu diyaarad ka raaco oo sida Muuse Biixi of Somaliland isku daawado..
Maaha dad problemkooda Deni, Madoobe, etc xalin karaan.
April 6, 2021 - 8:04 pm
Kuwa doqomada ah oo webbsite-kan qora waa xoolo agoontii Kacaanka ah..kkkkk
Kuye; Jeesow Faroole dhagaha ka tumay…kkkkkkkkkk
Ninkii dastuurka, labada gole, Garoowe 1+2 soo sameeyey ilaa maanta leh: Somali keligiis taliye iyo qori caaradiis waa ka kortay oo mighty Puntland of Somalia xoog ku qabsan kartaa Garoowe in ayaga la qabsado ha joogtee.
Bilaha soosocda, Digir iyo Buusho ayaa loo kala bixin.✌️
April 6, 2021 - 8:10 pm
Quraanjaduba mar bay Libaax qaniintaaye
Ey qoyaan kugu taabta waa laga qubeystaa
Adeer Faroole waxaan kuu qalmin iyo Ey baa kugu candhuufee 7 goor ka maydho,hana u jawabin in loo jawaabuu rabaaye
April 6, 2021 - 8:50 pm
Kkk xageebuu kala qaaday Faroole, ruuxan hadalka jilicsan, xantii laga sheegayey iyo hadal jileeciisu waa is leeyihiin.
Dameertu ma aha inay isku dhereriso Fardaha, waxaan ka wadaa hebelkaa Jeesowgan hadalka jilicsan iyo Dr Cabdiraxmaan Faroole isku level maha iyo isu jawaabi kara, markaa annagaa xaal siinay Cabdiraxmaan Faroole.
Shilimada yaree laga siiyo Villa- Wardhiigley ayuu rabaa inuu ku wasaqeeyo dad muxtaram ah oo sharaf leh.
April 6, 2021 - 8:53 pm
Dameertu ma aha inay isku dhereriso Fardaha, waxaan ka wadaa hebelkaa Jeesowgan hadalka jilicsan iyo Dr Cabdiraxmaan Faroole isku level maha isumana jawaabi karaan , markaa annagaa xaal siinay Cabdiraxmaan Faroole.
Shilimada yaree laga siiyo Villa- Wardhiigley ayuu rabaa inuu ku wasaqeeyo dad muxtaram ah oo sharaf iyo cisi leh.
April 6, 2021 - 10:44 pm
@LOP KKK Caawa waa lagu galay hanoo danbayso Jeesow.
Ninkaan waalan Faroole muxuu isugu qaldaa dawaladda Somaliya iyo Marexan?
Dhabayaco miyaydan ogayn beentiina iyo tuuganamadiinii in la bartay?
Dawaladda Somaliya ilkayar wax ka hortaagnaayeen tuug qaainul wadan ah oo Col Abdullahi Yuusuf ugu horeeyay.
Dawlanimada aad sheegtay ee godka kasoo bixisay ma tan 26kun aad ku dishay we 60 ku dhaawcday 1.8 million aad ku qaxisay we millions ku dhacday total 21 MSBARE wax dilaayay sanad baa ku dishay intaa ka badan Amnesty international iyo Human rights watch.
Mise HAWIYE dhiigooda kasoo qaad maleh baad ka waddaa?
KKK Boqortooyo beel waligiin been kama ilbaxaysaan.
Faroole ayaa ka dhaqan xun Jeesow isaga bal la hadlo.
DHAQAN ADDOON BAAD LEEDIHIIN BAL SOO DHAGAYSO FAROOLE.ZINJIBAAR.COM
War Farmaajo ciddii maagaysaa iyagay u taal odayaashan wada xanuunsan qabsada.
April 6, 2021 - 10:56 pm
xildhibaan Jeesow si fiican ayaad ula hadashay daanyeer faroole ,adeer dalka ama dawlad loo dhanyahay ayaa ka shaqaynaysa ama waa lagu kala tegayaa.
Nabad iyo nolol ha jidho oo ha joogto.
April 6, 2021 - 11:34 pm
Nabadda bulaashay miyay ka bukaan, nolosha bidhaantay miyay ka bukaan, belada istaagtay miyay ka bukaan, qaranka biskooday miyay ka bukaan, geesiga baxnaanshay miyay ka bukaan?…
X.Jeesoow Xaquu ku addimay… Odaygan iyo waxa la midka ah waa in dalka iyo dadka si looga galaa…
April 7, 2021 - 12:10 am
Mahbarka cabaadkooda iyo calaacalkooda loo joojinmaayo,dabadhilif waqtigiisii waa dhamaaday,maseyr iyo cuqdad wey la dhiman,xabashi,emirat iyo kenyaati iyo mahiige iyo gebre la kaalmeysto gudbe maalmahoodii,waxaa la joogaa dharaar aan laysku dhuuman karin no more garoowe 1,2 &3 ma shaqeyneyso damaaciga iyo maseyrka mahbarka iyo waalida oday faroole ee naceybka iyo xiqdiga ku dhisan dawaco meeshay macal uga barato,ayay macaluul ugu baqtidaa. Dad bay meeli bugtaa,bugtaa,dad bay meeli bugtaa,beeraha aan qodano,miyey ka bukaan,bulshada is raacday,miyey ka bukaan,far aad iyo kheyrka,miyey ka bukaan,nabad iyo nolol miyey ka bukaan.
April 7, 2021 - 12:12 am
Nin ay islaantu u dirsan jirtay XAABADA dabka
lagu shido ayaa soo fadhiistay Shir looga tashanaayey
Masiirka iyo Mustaqbalka Tolkiis
Islaantii ayaa aragtey asagoo shirkii wali fadhiyo
Qoraxduna sii dhicirabto
– Markaas ayey dhahday war orod iidoon
Qoryaha awal miyaa adiga wax lagaa waydiinhayey
Dagaal iyo Nabada ama Qaaran iyo Qidmo
Hadda Hawiye sida Daarood ka
Maahan oo shaqada iyo hogaanka
Marhore ayaa lagu kala baxay
Yes markey joogto Kismaayo Mr JEESOW
Lkn markey joogto Xamar iyo Villa Xamar
Nimaan Hiraab aheyn waxba lagama
Waydiinhayo NABAD IYO DAGAAL
Midkuu Hawiye qaadan
Hawiyeha kale waxaan ka aheyn Kharash
Naguma soo kordhiyaan
April 7, 2021 - 12:15 am
War ninkan miskiinka ah ee ina farmaajo ka dhex hadlayo waqti yaan lagu lumin
Ee somaliya halaga badbadiyo jajusiintii KACANKI somali la haray 2021 ayey
Waxay ku lee yihiin ITHOPIA iyo ERITERIA dalka Noo qabanaysa waa dad nolsha
Ku saaqiday GAAJO DUUBAN iga dheh
April 7, 2021 - 12:21 am
Waxaan xasuustaa Goodax Barre oo markay soo diraan Villa-Wardhiigley kadaba qaata Dr Cabdiraxmaan Faroole iyo ardayda reer Puntland.
Hada maskiinkan hadalka jilicsan ee Hiiraan, Buuleburde ka yimid maxaa Burtinle oo Puntland ah iyo Dhoobley oo Jubaland ah ka quseeyo?
Kushubo hakuu dhawaaqee kkkk
April 7, 2021 - 12:34 am
Asxaabta salaan kadib,
Waan aqriyey waxa aad qorteen.
“Nabadda bulaashay miyay ka bukaan, nolosha bidhaantay miyay ka bukaan, belada istaagtay miyay ka bukaan, qaranka biskooday miyay ka bukaan, geesiga baxnaanshay miyay ka bukaan?…”
Barwaaqadii naloo sheeginjiray meeday? Sowtaan xaarkeena cunay…
Kacaan cusub…….armaan caruurta iska cunaa markale.
Ninkii soo joogso laga waayo soo jiifso ayaa laga helaa.🇸🇱
April 7, 2021 - 12:36 am
Meesha qabiil ahaan lagu kaftamaa..
Dhuloos iyo Mareexaan kee tahay?
Dabshid cusub iga dheh..kkkkk
April 7, 2021 - 1:27 am
masha allah geesi wadani ilaahay cadowgaga iyo cadowga nabad iyo nololba ha jabiyo u sheeg odaygan asaasaqa ah ee aakhiro ilaaway in xabsi guri la galin karo hada isagoo qufaacaya o carona hayo buu cidwalba ku qufacaayey in 2 weeks quarantine la galiyo bay ahead kuwan iixii 70 ka wayn karbasha isaga iyo kuwa dadiisa ah in jail wayn lagu ururiyaa oo lagu ilaabay aheed becouse qabyaalad iyo cuqdad waxan aheen inaguma soo kordhinayan noociisa waa kuwa somali halka ay taalo dhigay ee dhalinyarooy waa dalkaaga waxa lagu dheelaya ee odaygan asaasaqay meel fadhiisaya waa howl gab Ayaan waxba la waydiin, jeesow thank you afartan xanauunsan ee halkan soo gala haka xaanqaadan inta badan shacka somaliyeed jaa nabad iyo nolol,kuwan waa minority ha iska ciyaan ha Ciyo maanlaawuhuye caruur iska hadasha iyo ka soo qaad meel cidla ah codkooda dhagaha ka xidho.
April 7, 2021 - 1:31 am
Kan Baarqab wataa waa wagardhac
April 7, 2021 - 5:31 am
Jeesoow faroole waad ujawaabi kartaa laakiin majeerteen maxaa keenay meesha yaxar aan sumad lahayn baa tahay faroole iyo majeerteen kala baro
April 7, 2021 - 6:25 am
Doqon Mahbarka ah in aad tahay Jeesoow baad ku leedahay Burtinle wuxuu North G/Kacyo u jiras 350??? KKKK kadaab ilashay been u sheegay iga dheh. Cuqdadii dishay udbalacag ayaa ku haysa, maxaad maalin walba qof dhintay oo shar iyo khayrba الله la hortegay aad uga daba niic leedahay?? Faroole Majeerteen ayuu kala dilay ((riyo haday dib leeyihiin dabadooda ayay ku warsan lahaayeen)) waxaana Dowladda Soomaalia ka codsan lahaa in afbalaq Faroole la dhigo jeelka labaatan jorow.